गजल बारे छोटो चर्चा | मरुभूमीको कोसेली nepalkuwait
Posted on फ्रेवुअरी 6, 2010 by nepalkuwait	मनोज काफ्ले ‘मनसुन’ हुनत नेपाली भाषामा गजल भनेको कुनै नौलो बिधा त रहेको छैन तर राम्ररी हेर्ने हो भने अंग पुर्‍याएर र यसका संरचनाका निश्चित नियम र परिधि भीत्र बसेर लेख्‍नेको संख्या भने निकै कम छ। गजल पढन र सुन्न जत्ती मनोरन्जक, रोमान्चक र कर्णप्रिय हुन्छ बास्तबमा लेख्‍न त्यत्तीकै जटिल, मुश्किल र दूरुह । दौंतरीमा केहि समय यता यसको बारेमा निक्कै बहस शुरु भएको र म आफू पनि गजल प्रेमी (जानकार हैन भन्ने कुरा पहिलै खुलस्त गरौं) भएको नाताले यो हप्ताको फुर्सदको समयलाई यहि बिधाको सामान्य संरचनाको अध्ययनमा लगाएँ। केहि समय यता दुई-दुई लाईनका तुक मिलाएर लेखिएका भावनाहरुलाई ‘गजल’ भनेर लेखीन र छापिन थालिएका छन । दौंतरी मात्रै हैन, धेरै अनलाईन र सहित्यिक पत्रिकाहरुमा समेत गजलको नाममा कविताहरु धेरै पटक प्रकाशीत भएका छन । गजलको उद्गम र परिभाषा बारेमा भिन्न भिन्न मत भएपनि गजल अरबबाट शुरु भएको अनी बिस्तारै काव्यको यो विधा फारसी, उर्दू हुँदै हिन्दी, नेपाली र अन्य भषामा पुगेको कुरामा धेरै शोधकर्ताहरुको एक मत छ । यो सानो पोष्टमा गजलसंग सम्बन्धित केहि आधारभूत शब्दावलिको चर्चा गर्ने कोशीस गरिने छ।
साधारणतया गजलका यि शब्दाबलीलाई अर्थ्याउन गालिब वा जफर गोरखपुरी वा त्यस्तै कोहि प्रख्यात गजलकारका गजललाई प्रस्तुत गरिन्छन। तर ति सबै उर्दू वा अन्य कुनै भषामा हुने भएकोले म मेरै यौटा सरल गजल यहा राख्दैछु:
आशा जती निरासामा मोडिएर भार भयो
हांसीखुसी बाच्ने रहर तोडिएर भार भयो
साथसाथै रुनेहास्ने खाएनौ र कसमपनी
लत्तायेर गयेउ पर छोडीएर भार भयो
रानीबनको प्रेमपत्र रानीबनमै छोडीएछ
सपनाका टुसा हरु गोडिएर भार भयो
टुटे बरु हल्का हुन्थ्यो पथ्थर रैछौ तिमी
गंतब्येमा ढुंगा मुड़ा जोडिएर भार भयो
कहिँ त पुग्थे म एक्लै एक्लै हिंडेपनी
हिंडे तिम्रो साहाराले लोडिएर भार भयो
जस्तै माथिको गजलको पहिलो शेर: आशा जती निरासामा मोडिएर भार भयो हांसीखुसी बाच्ने रहर तोडिएर भार भयो मा आशा जती निरासामा मोडिएर भार भयो ” भन्ने हरफ मिसरा उला हो भने “हांसीखुसी बाच्ने रहर तोडिएर भार भयो” भन्ने दोस्रो लाईन मिसरा सानि हो।
काफिया: यो गजलको एकदमै महत्वपूर्ण अंग हो। यदाकदा यसलाई गलको मुटु वा ज्यान पनि भनेर परिभाषित गरिन्छ। काफियाको शाब्दिक अर्थ पछि पछि आउनु भन्ने हुन्छ । माथिको गजल हेर्दा ‘मोडिएर तोडिएर गोडिएर आदि शब्द, जुन हरेक मिसरा सानिमा पछिल्तिर आएका छन र फरक-फरक छन, लाई काफिया भनिन्छ । गजलमा साधारणतया अर्थ फरक आउने शब्द अपबाद हुने बाहेक उहि अर्थ आउने काफियाको प्रयोग गरिदैन। हुनत केहि नाम चलेका गजलकारहरुले पनि काफिया दोहर्‍याएर गजल लेखेका छन, तर हरेक शेरमा भिन्न भिन्न काफियाको प्रयोगले नै कुनै पनि गजलकारको भषीक ज्ञान, प्रखरता, र प्रतिभाको पूर्ण प्रदर्शन गर्छ । अनी दोहोरिएको काफियाले गजलकारको मात्रै हैन, जुन भाषामा गजल लेखिएको छ त्यो भाषाको शब्दकोषको समेत गरिवि पनि झल्कयाउँछ । त्यसैले काफियालाई तुक मिलाउने मेसोको मात्र उपयोगीतामा हेर्नु गल्ति हुनेछ।
रदीफ: काफिया संगै आउने शब्द वा शब्द समुहलाई रदिफ भनिन्छ । जुन शेर पिच्छे बदल्न मिल्दैन र गजलको अन्त सम्म अपरिवर्तित रहन्छ।
जस्तै माथिको गजलमा: “आशा जती निरासामा मोडिएर भार भयो
हांसीखुसी बाच्ने रहर तोडिएर भार भयो ” मा ‘भार भयो ’ रदिफ हो, जुन अन्तसम्म एउटै छ ।
मत्ला: मत्लाको शाब्दिक अर्थ “आरम्भ” वा शुरुवात भन्ने हुन्छ, अत:कुनै पनि गजलको पहिलो शेरलाई मतला भनिन्छ । जस्तै माथिको शेरमा: ““आशा जती निरासामा मोडिएर भार भयो
हांसीखुसी बाच्ने रहर तोडिएर भार भयो ”” भन्ने शेर यो गजलको मतला हो। यहा याद गर्नु पर्ने कुरा के छ भने मतलाका दुबै मिसरामा काफियाको प्रयोग भएको हुन्छ। तर गजलका अन्य शेरमा भने मिसरा सानिमा मात्रै काफिया हुन्छ ।
www.manojkafle.wordpress.com Like this:Like Loading...
Filed under: समचार « युनिटिले राहत बितरण गर्यो माउन्ट एभरेष्ट क्ल्बले एम.बि. बम्जन गोल्ड कपको भव्यताका साथ सुरुआत गर्‍यो »